कता जाँदैछ समाज ? आठ महिनामा एउटै जिल्लामा सम्बन्ध बिच्छेदका ८४ मुद्दा !
पाल्पा । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा पाल्पामा चौरासी वटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४१ वटा मुद्दा फस्र्यौट भएको जिल्ला अदालत पाल्पाका तहसिलदार भेषराज खनालले जानकारी दिए । फस्र्यौट हुन बाँकी ४३ मध्ये एक मिलापत्र, चार फैसला र दुई फिर्ता भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा एक सय ३३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये एक सय ११ वटा फस्र्यौट भएको थियो । ०७३÷०७४ दर्ता भएका एक सय २४ वटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दामध्ये एक सयवटा फस्र्यौट भएको जिल्ला अदालत पाल्पाले जनाएको छ ।